MUSHARAXA QUDHA EE XALAASHA AH WAA CIRRO ….. | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
MUSHARAXA QUDHA EE XALAASHA AH WAA CIRRO …..
Dad muslim sheegta baynu nahay oo rumaysan in ilaahay ina arkayo markasta , waxaynu u soo taagnayn in Muse Biixi in xoog iyo xaraan maqdaca Siilaanyo kaga dhigay Musharax oo raggii la tartami lahaa ee ka heli lahaa sida Moxamed Biixi Yoonis cudud ciidan lagu wareejiyey afduub iyo beenbeen loogu cumaamaday Muse Biixi musharaxnimo xaaraan ah. Halkaa waxaa ka ratibmaya xaaraan ciidda ka badan oo maanta qof kastoo u codeeya Muse Biixi Xaaraan Rabbi xarrimay buu u codeeyey wixii waxaa lagu helaana waa xaaraan aan xaj iyo sadaqo laga aqbalayn.
FAYSAL ALI WARAABE Xaaraan weeye musharaxnimadiisu musharixii xaqa ahaa wuxuu ahaa Mudane Jamaal Ali Xuseen. Salaadda wejiga kaga taal waa dhibiil daba Faysal wuxuu waxaa dhex helaana waa xaraan cidda u foodddaa waa xaaraam. Suldaankii Somaliland na wuu habaaray shalay. Habaarka ummadda madaxdoodu wuu kacaa waa arin kutubta ku soo aroortay markuu xaq yay habaarku.
Haday ummaddan wax gaadhaan oo alle ku sameeyo waa dambigaa Madaxweynaha kii laga dhigay ku kacay.
CUQUBADU HALKII LAGU GALAY CAWKU HURUDDAA .
CARUURTAY KA LAYSAA NINKII CAANO BAAS DHAMA E.
Anigu waxaan kula talinayaa qofkii if iyo aakhiro dan iska la haw musharaxa xalaasha ah ee Cabdiraxmaan cirro u food si aa ilaahay uga badbaaadaan isagaa xaqqii ku taagan maanta. Labada kale wadadii shaydaanka oo madaxweyne Siilaanyo u hor kacay bay ku haligmayaan ha raacina.
Dib u eega wax kastoo cabdiraxman cirro yidhi shantii sano u dambaysay mid is khalaafi kuma jiro. Bal Faysal iyo Muse dib u eega hadaladoodii iyo ficiladoodii waa wada isweydaar .